Yaada 'Tirasti Fandii' akka Diyaasporaafi ogeeyyiin itti ilaalan - BBC News Afaan Oromoo
Erga Ministirri Muummee Dr. Abiy yaada 'Tirasti Fandii' Diyaasporaa giddu-galeessa godhate ni hundeessina jedhanii namoonni hedduun irratti dudubbachaa jiru. Yaada miseensota Diyaasporaafi ogeessota dinagdee kanarratti iyyaafanneerra.
Torban lama dura Ministirri Muummee Dr. Abiy paarlaamaaf baajata kan bara 2011 dhiyeessanii yeroo raggaasisanitti yaada haarawaa rakkoo sharafa alaa mudateef furmaata ta'a jedhan dhiyeessanii turan.
Yaadni isaan dhiyeessan tokko madda galii Diyaasporaa fayyadamuuf ni dandeessisa kan jedhan 'Tirasti Fandii' hundeessuudha.
'Tirasi Fandiin' hundeeffamu kun galiifi baasiin isaa kan boordiidhaan sirriitti hordofamu ta'ee akka 'Diyaasporaan guyyaa guyyaan Dolaara tokko gumaachan gaafanna', jedhan.
Haala kanaanis biyyattiin yoo xiqqaate guyyaa guyyaan Dolaara miiliyoona tokko argachuu dandeessi jechuun abdii qaban dubbatan.
'Tirasti Fandiin' maalidha?
'Tirasti Fandi' jechuun qaama seera qabeessa namootaaf, gureef ykn dhaabbileef maallaqa callaa ykn meeshaa kan to'atudha jechuudha.
Akaakuun 'Tirasti Fandii' gara garaa jiraatanillee hundi isaanii garuu waan bu'uuraa sadii walfakkaatu qabu. Isaanis, maallaqa callaa ykn meeshaan kan arjoomu, to'atuufi fayyadamtoota fadichaati.
Akka yaada Minisitira Muummichaatti 'Tirasti Fandiin' kun Itoophiyaa keessatti ykn biyyoota Itoophiyaan ala ta'anitti hundaa'uu ni danda'a. Haala kanaan hawwaasni Diyaasporaa fedha isaaniitiin garaa garummaa yeroo ta'e gidduutti buusii 'Tirasti Fandii' kanatti ergu.
Guyoota muraasa dura lakkoofsi herregaa 'Tirasti Fandii' kanaa kan beeksifame yommuu ta'u hawwaasni Diyaasporaa marsariitii 'Tirasti Fandii' yeroo dhiyoo keessatti labsamuun ykn dhaabbileen 22 ta'an maallaqa akka addunyaatti daddabarsan fayyadamuu akka danda'an Itti Gaafatamaan Waajira Ministirri Muummee Obbo Fitsumma Araggaa beeksisaniiru.
Ministirri Muummichaa yeroo kana beeksisanitti, 'Diyaasporaan makkiyaatoo tokkoof Dolaara 5 baasu. Baasii makkiyaatoo isaaniirraa biyya isaaniif Dolaara tokko osoo baasanii ji'atti Itoophiyaan Dolaara miliyoona 30 akka argattu taasisa jechuudha," jedhan.
Diyaasporaan maal jedhu?
Obbo Habtaamuu Ababaa biyya Ameerikaa Kutaa Meeriilaandii keessa jiraata. "Umuriikoo keessatti ijakootiin jijjiirama akkasi an arga jedhee kanan hin yaadiin argaan jira. Baayyees itti gammadaan jira. Kanan danda'u hundas gochuudhaaf qophaa'eera," jedha.
"Ministirri Muummichaa ga'een Diyaasporaa maal ta'uu akka qabu sirriitti kaa'aniiru. Anis ta'e haati warraakoo 'Tirasti Fandiin' kun hundeeffamee ga'ee keenya ba'uuf qophoofneerra," jedha Obbo Habtaamuun.
Jiraataa biyya Ingiliiz Landan kan ta'an Obbo Phaawuloos Ayyaalehu "Dimokiraasiifi ol-aantummaa seeraa tokko malee mootummaan gaggeessaa ture tokko amma fuula isaa naanneffatee horii buusaa yeroo jedhu akka ani yaadutti amanamummaa hin qabu.
Humna qarshii biyya alaarraa argamu bulchuu hin qabu. Uummannis isa hin filanne. Malaammaltummaa biyya keessatti dagagaa jiru baballisuuf yoo ta'e malee uummatichaaf bu'aa hin qabu," jechuun yaada 'Tirasti Fandii' kan hundeessuu busheessan.
Jiraataa biyya Ingiliiz, Landan kan ta'e Obbo Phaawuloos Ayyaalehu ammoo" Mootummaan dimokiraasiifi ol-aantummaa seeraa tokko malee hojjechaa ture, ammoo fuula gala galfatee maallaqa buusaa anaaf amanamummaa hin qabu.
Maallaqa biyya alaarraa argamu kana bulchuudhaaf dandeettiis hin qabaatu. Uummanis isa hin filanne. Malaammaltummaa biyya keessatti dagagaa jiru kana akka caalaa baballatu gochuurraan alatti bu'aa biraa uummataaf fidu hin qab," jechuudhaan yaada 'Tirasti Fandii' kana hudeessuu busheesse.
Ameerikaa Kutaa Verjiiniyaa kan taate Aadde Tsedey Buzaayyoo "Ministirri Muummichaa kan jedhan raawwachuuf ani qophiidha. Ani kanan barbaadu namoonni nuun bakka bu'an qaama 'Tirasti Fandichaa' ta'anii haala raawwiisaa yeroo yerootti gabaasa nu geessisan qofaadha," jetti.
Jiraataan Ameerikaa Ktaa Mineesotaa Yaared Getaachoos yaada Ministira Muummee kana akka gaarii ta'etti ilaalu. "Ministirri Muummichaa osoo yaada kana hin kaasiin durallee akkamitti ga'ee nurraa eegamu biyya keenyaaf akka gumaachinu akka maatitti mariyachaa turreerra," jedhe.
Akka Yaared jedhutti "Namoonni baayyeen biyya isaanii maallaqaan gargaaruu barbaadu garuu qarshiin walitti qabamu kun meeshaa waraanaa ittiin bituuf fayyadamu. Itti gaafatamummaafi iftoominni jiraannaan waan nurraa eegamu hunda raawwachuudhaf qophaa'oodha, jechuun ibsa.
Ogeeyyiin attamiin ilaalu
Ogeessa dinagdee kan ta'an Obbo Kirubur Gannaa yaadni ministira muummee kan isaaniif liqimfame hin fakkaatu. "'Tirasti Fandii' hundeessuun maallaqa biyya alaatii dhufu akka itti fufu jajjabeessuurraa kan hafe faayidaa biraa hin qabu," jedhan.
"Ani akka dhuunfaakootti, Diyaasporaa hin amanu. Diyaasporaan guddina dinagdee biyyattii keessatti ga'ee akka qabu nan hubadha. Haata'u malee, xiyyeeffannaan, qabeenya biyya keessa jirurratti xiyyeeffatamuu qaba," jedhan.
Karaa biraan, odeessi dinagdee Dr. Nuuruu Sa'id "Maallaqni lammileefi dhalattoonni Itophiyaa biyya alaa jiran gara biyyaatti ergan maallaqa biyyattiin biyya alaatti daldaluun argattu dachaadhaan caala," jedhu.
Ministirri Muummee Dr. Abiy kan waan hubataniif kan waamicha kana dhiyeessan kan jedhan Dr. Nuuruun, maallaqa karaa seeraan alaa galan gara seera qabeessa ta'etti fiduun qofaan biyyattiin akka waan guddaa buufattu taasisa.